Semalt Expert: Ianao, Eny, Ianao! Fantatrao ve hoe inona no fitadiavana fitadidiana fanahy?
Ny famadihana Ghost na spam referrer dia ny fifamoivoizana sandoka izay miseho ao amin'ny kaontinao Google Analytics. Na izany aza, rehefa manara-maso akaiky ny toerana misy ny fitsapana ianao, dia ho hitanao fa avy amin'ny tranonkala fanondroana izy ireo ary hampitombo ny taham-pidinao. Amin'izao fotoana izao dia misy karazana roa amin'ny karazana fitsangatsanganana fantatry ny Google Analytics. Voalohany indrindra, misy spam bots and crawlers izay mamaritra ny pejy Internet anao ary tsy miraharaha ireo rakitra robots.txt. Ny karazana faharoa dia Darodar, izay azo antsoina hoe programa tsy miankina amin'ny fifamoivoizana. Ryan Johnson, Semalt Mpitarika Success Manager, dia manazava fa ny olana fototra dia ny avy amin'ny sehatra maro, ny adi-hevitra ara-tsimiafatra avy amin'ny ghost, ny ankamaroany dia ny lohahevitra lehibe ary ny fandikana vohikala amin'ny famantaranandro.
Ny fahasamihafana eo amin'ny bôotika spam sy ny fitsidihan'ny ghost dia ny kalitaon'ny fifamoivoizana. Ny fitsangatsanganana an-tsokosoko fanta-daza dia mandefa ny fifamoivoizana avy amin'ny sehatra vaovao tsy fantatra, nefa tsy mitsidika ny tranokalanao mihitsy. Aleo izy ireo mametraka ny diplaoman'ny dizitaly izay mahakasika ny kaonty Google Analytics ary mampitombo ny taham-pidinao. Miezaka ny manara-maso ny code Google Analytics izy ireo, ary afaka manakana azy ireo ianao amin'ny famoronana filters amin'ny kaontinao. Amin'izany fomba izany, dia ho afaka hampiato ny sangisangy ara-nofinofinao ianao amin'ny fanimbana ny antontan'isa momba ny analytics ianao.
Misy fiantraikany amin'ny tranonkala SEO na tranonkala ve ny tranonkala?
Tsara ny manamarika fa tsy misy fiantraikany amin'ny SEO na tranonkala ny tsipika momba ny maotera fanta-daza. Araka ny efa nambarantsika fa tsy mitsidika ny tranokalanao izy ireo fa miseho amin'ny mpanaraka ambony indrindra ny data Google Analytics..Na izany aza, izany no fiantraikany amin'ny tatitra momba ny angona sy ny fanadihadiana. Ny fitsangatsanganana an-tsehatra fantatry ny mato-tsaina dia mamely ny tranokalanao mandritra ny tontolo andro ary mampiseho bisikileta arivo ao anatin'ny 24 ora.
Ny sangisangy ara-jeôgrafika dia manao ireto manaraka ireto ao amin'ny tranokalanao:
Mampitombo ny taham-pitenenana ankapoben'ny pejy Internet izany.
Mety hampihena ny isan'ny mpitsidika ao amin'ny bilaoginao na tranokala izany.
Mampiato ny angon-drakitra fanodinkodinana izany ary mahatonga azy ho henjana raha hitanao na tsia ny fifamoivoizana na tsia.
Izany dia manakana ny Fiovan'ny Tanjona sy ny angon-drakitra, ka handefa fitsidihana marobe avy any Rosia.
Ahoana ny fandefasan'ny mpitsikera referendera any amin'ny kaonty Google Analytics ny data?
Ao amin'ny code jamidinao, ny ID iray dia mamaritra ny Google Analytics izay mandefa anao fifamoivoizana. Mampiasa ireto fomba telo ireto ny spam mba handefa mpitsoa-ponenana sandoka sy hitsidihana ny kaonty Google Analytics anao:
2. Nametraka ny botso-automaty izy ireo hanodinana ny tranokalanao, manamboatra ny mpandika-teny ary mampiseho fitsidihana marobe.
3. Nametraka botsika manokana izy ireo mba handefa ny angona mivantana amin'ny Google Analytics ary tsy miditra amin'ny tranonkalan'ny fitsangatsanganana.
Ny fomba tsara indrindra hisorohana ny fitadidiana ny spam dia ny famoronana ny sivana na ny fanovana ny rakitra .htaccess anao. Azonao atao ny manangana filiro marobe satria tianao ny hisoroka ny fitsapana mampiahiahy manimba ny data Google Analytics Source .